Shirkadda Google oo dhisaysa magaalo dhan oo 'Internet-ka' ku shaqaysa - BBC News Somali
Shirkadda Google oo dhisaysa magaalo dhan oo 'Internet-ka' ku shaqaysa
Xigashada Sawirka, Sidewalk Labs
Naqshad muujinaysa qaabka laga rabo magaalada
Bariga magaalada Toronto ee dalka Canada waxaa ah meel xeeb ah oo aanan la isticmaalin, waxaase hadda la doonayaa in loo badalo magaalo dhan oo xiimaysa, casri ah, islamarkaasna u dhamaystiranyihiin adeegyadeedii oo dhan.
Shirkadda Sidewalk Labs oo ay leedahay Google ayaa soo jeedisay in ay ka dhisayso magaalo ku shaqaysa tiknoolajiyadda casriga ah.
Qalabka ku xiran magaalada ayaa uruurinaya xogo
Dan Doctoroff oo ah agaasimaha shirkadan, horeyna u ahaan jiray ku xigeenka duqa magaalada New York ayaa BBC-da u sheegay in ay dhisayaan magaalo ka caafimaad wanaagsan kuwa kale, ka habboon, kana badqab wanaagsan.
Waxaa lagu rakibayaa qalab soo jiidanaya, ama duubaya shanqarta baabuurta iyo xitaa tayada hawada, iyaga oo sidoo kale kormeeri kara sida uu u shaqeeyo hab casri ah oo qashinka lagu qaado oo korontada ku shaqeeya.
Dadka waxaa lagu dhiirogalinayaa in ay lugeeyaan, ama baaskiil wataan mise raacaan baabuur iyaga kaligoos is kaxaynaya
Balse arrintaas waxaa su'aal ka keenay ku xigeenka duqa magaalada Toronto Denzil Minnan-Wong oo yiri "Maxaa hadhoow loo isticmaali doonaa xogtaas, waxaa jira dhibaatooyin kale oo ka jira magaalada Toronto".
Balse shirkadda Sidewalk ayaa BBC-da u sheegtay in qalabkan aysan uruurin doonin xogta dadka , balse loo isticmaali doono in lagu horumariyo nolosha dadka.
Arrinta kale ee jirta ayaa ah baaxada dhulka magaalada laga dhisayo, markii hore shirkadda waxaa loo ogolaaday 12 acre oo kaliya, balse hadda waxa ay doonaysaa in ay dhisato meesha oo dhan , taasoo ah 325 hiktar, waxayna ka dhignaanaysaa dhul boobkii ugu weynaa.
Waxaa kale oo shirkadan lagu qabsaday in aysan xiriir toos ah la samaynin dowladda hoose ee Toronto, balse taas badalkeeda ay si hoose ula xiriiraysay shirkad loo xil saaray meesha ay doonayso in ay magaalada ka dhisto.
Sharciyo waxaa jira sharciyo ay magaalada Toronto leedahay oo laga yaabo in Google ay hareer marayso, waxaana ka mid ah sharciyada tartanka xorta ah haddii ay tahay in dhulkaas shirkad lagu wareejiyo.
Fikradaha Casriga ah ee Shirkadda.
Shirkadda waxa ay la timid fikrado casri ah oo ay magaalada uga shaqaysiiso
- Baabuur kaligood is wadaya
- Dhismayaal ka samaysan alwaax , kuwaas oo gudaha qofka naqshadda sida uu doono u badeli karo
- Barnaamij lagu xakamayn karo cimilada si dadka waqti badan ugu qaadan karaan banaanka. Waxaa jira meel ay dadka ka gali karaan roobka iyo waliba qalab kuleelka ah oo ay kulaahi karaan marka uu qaboowga jiro.
Qalabka robot-ka ayaa ka shaqaynayay dhulka hoostiisa si ay qashinka iyo waliba alaabaha u qaadaan
Shirkadda Sidewalk Labs mashaariic kale ayay ku leedahay magaalooyin kale sida New York City
Qorshaha waxa uu yahay oo kale in la dhiso magaalooyin ku habboon deegaamaynta, iyada oo la'isku dayayo in laga maarmo dhismayaasha dhagaxa, carrada iyo birta ka kooban.
Dhismayaal alwaax ka samaysan
Waxaa tusaalaha ugu wanaagsan laga qaadanaya magaalooyinka yaryar ee ceynka oo kale ah sida tan ku taala Abuu Dubai ee Masdar iyo tan Songdo ee Kuuriya Koonfureed.
Sidewalk waxa ay rabtaa in dhammaan adeegyada caafimaadka iyo daryeelka bulshada hal meel la'isugu geeyo.